पीसीआर परीक्षण नगर्ने योजनामा सरकार, संक्रमणको दर अत्यधिक बढ्ने खतरा « Etajakhabar
प्रकाशित मिति : २४ जेष्ठ २०७७, शनिबार ०९:०९
काठमाडौं । सरकारले क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका सबै नागरिकको आरटीपीसीआर परीक्षण नगर्ने भएको छ । तर, विज्ञहरूले भने भरपर्दो र विश्वसनीय भएकाले पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् । तर, सरकारले उनीहरूको सुझावलाई बेवास्ता गरेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि कोरोना भाइरस पहिचानका लागि आरटीपीसीआर विधि नै उपयुक्त भएको बताए पनि क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका सबै नागरिकको आरटीपीसीआर परीक्षण नगर्ने योजनामा सरकार पुगेको हो । जसका कारण संक्रमणको दर अत्यधिक बढ्ने खतरा देखिएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरस पहिचानका लागि आरडीटी कीट प्रयोग नगर्न पटक पटक भन्दै आएको छ । तर, संक्रमणको स्रोत नै मानिएका क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका नागरिकहरू लक्षणविहीन देखिए तत्कालका लागि आरडीटी कीट प्रयोग गर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशिका तयार पारेको छ ।
शुक्रबार मात्रै सुर्खेतको क्वारेन्टिनमा बसेका एक युवाको आरडीटीमा नेगेटिभ रिपोर्ट आएको थियो । तर, उनको मृत्युपश्चात् पीसीआर परीक्षणमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो । सरकारले क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका सबैको पीसीआर टेस्ट गर्नुपर्ने माइक्रोबायोलोजिस्टको जोड छ । त्रिवि माइक्रोबायोलोजी केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख प्राडा. मेघराज बन्जाराले नेपालमा हाल प्रयोग भइरहेको आरडीटी कीट गुणस्तरहीन रहेको बताए । उनले भने, ‘नेपालमा प्रयोग भइरहेको आरडीटी टेस्ट गुणस्तरयुक्त छैनन् । आरटीपीसीआरलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले १ लाख ६६ हजार ७ सय ६५ जना क्वारेन्टिनमा बस्दै आएको जानकारी दिए । हालसम्म ८८ हजार ३ सय ६६ जनाको मात्रै आरटीपीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।’
प्रेस काउन्सिल अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्,‘गालि खान हामीले भारतीय च्यानललाई पैसा तिर्नु पर्ने हो ?’